Dambudziko remitumbi mitatu, inyanzvi yeCixin Liu | Zvazvino Zvinyorwa
John Ortiz | | Biography, Fikisheni yesainzi, Vanyori, Mabhuku, Novela
Dambudziko remuviri mitatu.
Dambudziko remuviri mitatu izita rebhuku rekutanga trilogy Kuyeuka kwekare kwepasi, Yakagadzirwa nemunyori wechiChinese Cixin Liu. Musoro wacho unoreva dambudziko - rinenge risingagadzirisike - mumunda weanotenderera makanika. Iva chinongedzo chinoshamisa mukati meAsia nyika.
Iyi inoverengeka inoonekwa sesainzi yekunyepedzera, ndezve kutanga kwevanhu kusangana nevekunze kwenyika. Zvakare, ichi chinyorwa chinyorwa chinonyatso kuona nekuda kwekutarisa kwaro basa resainzi munharaunda. Munyori anopa mumapeji ake maonero akajeka pane zvakapfuura neremangwana reChina zvine chekuita neazvino geopolitics. Kukanganisa kwayo kwave kwakadai zvekuti kunofanirwa kuverengerwa pakati mabhuku akanakisa easia.
2 Chokwadi nezve trilogy yemitumbi mitatu
3 Pfupiso yeChitatu Chinetso chemuviri
3.1 Iyo enigma yeanotenderera michini
3.2 Shanduko, umhondi, mavambo matsva
3.3 Costa Roja, chirongwa chakatsanangurwa
3.4 Wang Maio uye maFrontiers eSainzi boka
3.5 Muviri Mutatu
3.6 Ye Wenjie anodzoka
3.8 Icho chokwadi chisina kuchena
4 Kuguma kufunga nezvazvo
Liú Cíxīn akaberekwa musi waJune 23, 1963 muYangquan, Shanxi, China. Sezvo aive mudiki akatumirwa kunogara naambuya vake muHenan, izvi nekuda kwekudzvinyirirwa kwevakuru panguva yeCultural Revolution. Muhudiki hwake akadzokera kumusha kwake kunodzidza zvemainjiniya kuNorth China University of Water Conservancy neMagetsi Magetsi. Ikoko akapedza kudzidza muna 1988 uye akabva angoita basa iri kuYangquan Power Plant.
Pakutanga kwema1990, hurumende yeChinese yaive nekuvandudzwa kwesainzi uye tekinoroji pakati pezvavaikoshesa, nekudaro, mamiriro aive akakosha kwazvo mukusimudzira zvinyorwa zvesainzi. Muchirevo ichocho, Cixin Liu akatanga kusimudzira nyaya dzake nehukama hwakasimba hwemagariro uye yakajeka dzidziso kubva kuna Leo Tolstoy., Isaac Asimov naArthur C. Clarke.
Chokwadi nezve trilogy yemitumbi mitatu
Dambudziko remuviri mitatu yakawana munyori iye Hugo 2015 mubairo webhuku rakanakisa. Aka kaive kekutanga mubairo uyu ukapihwa kubhuku rine mutauro wepakutanga usiri Chirungu, yaive chiitiko chakakosha. Pamusoro pezvo, bhuku iri rakagashirwa muna2006 iyo yeGlobal Mubairo (China) yebhuku rakanakisa renyanzvi rekunyepa iyo Ignotus Mubairo 2017 uye iyo 2017 Kurd Lasswitz Prize.
Shanduro dzake dzakave dzakakurumbira zvekuti vakakurumbira saimbove Mutungamiri weAmerica VaBarack Obama vakazvisarudzira pakuverenga kwavo Kisimusi ya2015. Saizvozvowo, Mark Zuckerberg (mutungamiri uye mubatsiri-muvambi weFacebook) akasarudzwa Dambudziko remuviri mitatu sebhuku rekutanga rekirabhu rako rebhuku.
Iyo nhamba yekutanga chikamu cheiyo trilogy ye Ndangariro dzepasichigare Yakatanga kuoneka muScience Fiction World magazine muna 2006. Muna 2008 yakaburitswa mumhando yemabhuku, ichiva rimwe remabasa anozivikanwa muChina.. Kugoverwa kwaro muchiSpanish kwakatanga panguva ya2016 naEticiones B, yakabatanidzwa mune yayo yekuunganidzwa yeNOVA. Muna 2018 kuchinjika kwayo kugirazi hombe kwakaburitswa.
Iyo trilogy yemitumbi mitatu inopedzwa ne Sango rakasviba (2008) uye Kuguma kwerufu (2010). Asati awana mukurumbira wepasirese nezvakateedzana, Liú Cíxīn akagadzira zvimwe zvekufungidzira nesainzi fungidziro. Nguva yeiyo supernova (1999), Rural mudzidzisi (2001) uye Iyo inopenya bhora (2004). Yake yazvino posvo ndeye Nyika inodzungaira, uye mazuva kubva 2019.
Pfupiso ye Dambudziko remuviri mitatu
Iyo enigma yeanotenderera michini
Icho chinonzi chinetso chemitumbi mitatu mumunda wee orbital mechanics hachina mhinduro yakawandaUyezve, zvinowanzoitika zvine mhirizhonga. Pasi peichi chirevo, Liu anorondedzera nyika - Trisolaris - mukutenderera kweternary solar system, Alpha Centauri. Iko kushanduka kwesimba kuri pakati penyeredzi nhatu kunounza munyika ino mamiriro ekunze ane njodzi uye zvisingatarisike tectonic zviitiko zvakaparadza hupfumi hwayo zvisingaverengeke.
Shanduko, umhondi, mavambo matsva
Kutanga kwe Ndangariro dzepasichigare iri flashback inoisa muverengi pakati peChinese Cultural Revolution, apo vamwe vanonyanyisa vanoponda mudzidzisi wefizikiki Ye Zhetai achiona Ye Wenjie, mwanasikana wake mudiki. Mushure mekurarama pakakwirira kwemhirizhonga, anova nyanzvi yekuongorora nyeredzi. Zvisinei, hutongi hwehutongi hwenyika hunomutora semukadzi "anomukira".
Costa Roja, chirongwa chakatsanangurwa
Nekutyisidzirwa kwenguva yejeri, Ye Wenjie anoendeswa kuRed Coast, chirongwa chemauto chakarongwa. Nzvimbo yebasa haina kugadzikana nekuda kwekusavimbana pakati pake nevatungamiriri vekuferefeta. Nekudaro, ruzivo rwevechidiki nyeredzi nezve exoplanets uye nyeredzi dziri kure masisitimu anodikanwa kwazvo. Akasiya basa, anoshanda nesimba, akamirira mukana wekutsiva kufa kwababa vake.
Wang Maio uye maFrontiers eSainzi boka
Nhasi, iyo nanomaterials nyanzvi Wang Maio anopinda - mukukumbira kwemapurisa - muboka rakanzi maFrontiers eSainzi. Iyo isinganzwisisike gakava kirabhu yakaumbwa nevanoverengeka vanotungamira masayendisiti kubva kutenderera pasirese vakatarisa mukugadzirisa mhinduro yedambudziko remitumbi mitatu. Zvichida, mhinduro inozvidza miganhu yesainzi yakajairika.
Ruzivo rwekutanga kubva kumapurisa runoratidza mukana wakakura wekuti maFrontiers eSainzi akabatana nekuteedzana kwekuzviuraya kwemasayendisiti kutenderera pasirese. Gare gare, Mibvunzo yaWang inoratidza chinhu chakakosha: Vatatu Mutumbi, chirongwa chakakura chevazhinji chevashandisi veVR chinoshandiswa nemaFrontiers eScience nhengo. Iyi software inoteedzera Nyika ine isinganzwisisike shanduko yemamiriro ekunze.
MuMutumbi Mutatu hurefu hwemwaka (uye kunyangwe mazuva) haufungidzike. Misiyano yetembiricha yakanyanyisa nekuda kwekutsakatika kwezuva kwemakore kana, nekusiyana, iyo nyeredzi mambo inoita kunge iri kuswedera kupasi. Ikoko, vanhu vanogona chete kurarama nekuramba vari mune yakasarudzika mvura isina mvura mamiriro panguva yekunyanyisa mamiriro ekunze.
Nekudaro, kufungidzira nzira yezuva zvine musoro inyaya hombe umo Wang anotarisa uye kutora chikamu, sevamwe vatambi vari mumutambo, vasingabudirire kushandisa mazano ake padambudziko. Iye munyori webasa anotora mukana wemamiriro acho ezvinhu kutaura kune makuru mafambiro enhoroondo yesainzi uye inogadzira dzidziso yekuedzesera kuyedza kuona kana zvirevo zvekare zvaizobatsira mudambudziko remitumbi mitatu.
Ye Wenjie anodzoka
Nekudaro, kubva pakuva unongova mutambo wevazhinji vakawanda, uyu unoita kunge une mhedzisiro yakanangana nevatori vechikamu chaivo. Naizvozvo, Wang anotanga kutsvaga mhinduro pakati pemasayendisiti akasiyana siyana, kusanganisira akwegura Ye Wenjie. Vanomuzivisa izvozvo Mutatu Mutumbi iri mhando yekutaurisa chikuva inoshandiswa neyevatorwa budiriro, vaTrisolari.
Ipapo, Wang anoita mubatanidzwa naShi Quang, mupurisa anotsoropodza (akakodzera kusavimba kwese) asingafarire sainzi kuti aenderere mberi nekuferefeta kwake. Ivo vanoona kuti vatorwa vaizove chiri chaicho chikonzero kuzviuraya kwemasayendisiti kutenderera pasirese, sezvo chinangwa chayo chiri kukanganisa chokwadi chevanhu nesainzi uye kutorera vanhu chero mukana wekufambira mberi.
Wang anovandudza nanotech zvombo zvakaiswa nehondo commando (yakaunganidzwa naShi Quang) paFrontiers dzeSainzi radhi radar. Panguva iyoyo, mapoka maviri mukati meboka anova pachena: avo vatsigiri vekupinda kwevaTrisolari kuti vavandudze hupfumi hwevanhu nechisimba, vakatarisana nevaya vanoda kuparadzwa kwakazara kwevanhu.
Izvo zvinoratidzwa zvakare kuti "pro kuparadza" yakavhara mameseji ekunyepedzera echimwe chikamu kune veTrisolarians.. Wang anoendesa ruzivo rwese rutsva kuna Ye Wenjie, uyo anosimbisa fungidziro dzekare asingatarise kushamisika. Panguva iyoyo, akange awana nzira nyowani yekuendesa masaisai eredhiyo kumatunhu epakati achishandisa izvo zvinoratidzira mwaranzi yezuva.
Icho chokwadi chisina kuchena
Ye Wenjie anovimba nezvaakawana munguva pfupi yapfuura kutumira meseji kwakanangana naAlfa Centauri. Mune ino meseji, anokumbira rubatsiro kusunungura Nyika kubva kuhutongi hwecommunism, kurerutsa hurombo uye kupedza hondo. Asi vatongi veTrisolaris zvakare havatende mune zvemagariro zveruzhinji. Naizvozvo, meseji yerubatsiro inova chikonzero chakakwana chekupembedzwa kwevaTrisolarians "pro kuparadza."
Chekupedzisira, maTrisolarians anozivisa kune vese vanhu kuvapo kwavo uye zvirongwa zvavo zvekupinda. Vatorwa vanoratidza pachena kushora kwavo vachidaidza vanhu "zvipukanana." Nyevero yevatorwa inopinza Wang mukusuwa kukuru, asi Shi Quang anomusimbisa nekutaura kuti, nenzira yakafanana nekupona kwezvipembenene mukutarisana nehunyanzvi hwevanhu, hunhu hunokwanisa kuzviita.
Kuguma kufunga nezvazvo
Chitsauko chekutanga cha Ndangariro dzepasichigare anovhara naYe Wenjie achifamba ega kuburikidza nematongo eakare nzvimbo yeRed Coast. Ikoko, nyanzvi yekuongorora nyeredzi pamusoro pemhedzisiro yezviito zvake uye anoyeuka zvakapfuura zvakapambwa nekusuwa. Ipapo, zvinofungidzirwa, anotora hupenyu hwake.
Quote naCixin Liu.
Iri ibasa rinotarisisa rinotikoka kuti tifunge nezve zvatiri chaizvo semhando yezvinhu zvakasikwa.. Izvo zvinosiyawo zvinoverengeka zvisingazivikanwe kumusoro mudenga, kusanganisira "Tanyatsogadzirira kusangana kwepedyo?" Kana "Tiri zvechokwadi budiriro yepamusoro?" Chokwadi ndechekuti vanopfuura mumwe chete vachakahadzika mushure mekuverenga bhuku iri. Mhinduro dzinoenderana nemuverengi wega wega, chokwadi chiri pamberi pemaziso edu.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Biography » Dambudziko remuviri mitatu
6 akakwana mabhuku evechidiki ekuverenga muchirimo